Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Mbụ 6:1-81
Ụmụ Livaị na ụmụ ụmụ ya (1-30)
Ndị na-abụ abụ n’ụlọ nsọ (31-47)
Ụmụ Erọn na ụmụ ụmụ ya (48-53)
Ebe e kenyere ndị Livaị ka ha biri (54-81)
6 Ụmụ Livaị+ ndị nwoke bụ Geshọn, Kohat+ na Meraraị.+ 2 Ụmụ Kohat bụ Amram, Izha,+ Hebrọn, na Ọziel.+ 3 Ụmụ Amram+ bụ Erọn,+ Mosis,+ na Miriam.+ Ụmụ Erọn bụ Nedab, Abaịhu,+ Elieza,+ na Ịtama.+ 4 Elieza mụrụ Finihas,+ Finihas amụọ Abishua, 5 Abishua amụọ Bọkaị, Bọkaị amụọ Ọzaị, 6 Ọzaị amụọ Zerahaya, Zerahaya amụọ Mereyọt, 7 Mereyọt amụọ Amaraya, Amaraya amụọ Ahaịtọb,+ 8 Ahaịtọb amụọ Zedọk,+ Zedọk amụọ Ahimaz,+ 9 Ahimaz amụọ Azaraya, Azaraya amụọ Johenan, 10 Johenan amụọ Azaraya. Azaraya bụ onye nchụàjà n’ụlọ Solomọn rụrụ na Jeruselem. 11 Azaraya mụrụ Amaraya, Amaraya amụọ Ahaịtọb, 12 Ahaịtọb amụọ Zedọk,+ Zedọk amụọ Shalọm, 13 Shalọm amụọ Hilkaya,+ Hilkaya amụọ Azaraya, 14 Azaraya amụọ Seraya,+ Seraya amụọ Jehozadak.+ 15 A dọọrọ Jehozadak n’agha mgbe Jehova mere ka Nebukadneza dọrọ Juda na Jeruselem n’agha. 16 Ụmụ Livaị bụ Geshọm,* Kohat na Meraraị. 17 Ndị a bụ aha ụmụ Geshọm: Libnaị na Shimiaị.+ 18 Ụmụ Kohat bụ Amram, Izha, Hebrọn, na Ọziel.+ 19 Ụmụ Meraraị bụ Malaị na Mushaị. Ndị a bụ aha ndị isi ezinụlọ ndị Livaị:+ 20 Geshọm+ mụrụ Libnaị, Libnaị amụọ Jehat, Jehat amụọ Zima, 21 Zima amụọ Joa, Joa amụọ Ido, Ido amụọ Zira, Zira amụọ Jeateraị. 22 Kohat mụrụ Aminadab, Aminadab amụọ Kora,+ Kora amụọ Asia, 23 Asia amụọ Elkena, Elkena amụọ Ebayasaf,+ Ebayasaf amụọ Asia, 24 Asia amụọ Tehat, Tehat amụọ Yurayel, Yurayel amụọ Ọzaya, Ọzaya amụọ Sheọl. 25 Ụmụ Elkena bụ Amesaị na Ahaịmọt. 26 Onye ọzọ aha ya bụkwa Elkena mụrụ Zofaị, Zofaị amụọ Nehat, 27 Nehat amụọ Elayab, Elayab amụọ Jeroham, Jeroham amụọ Elkena.+ 28 Samuel+ mụrụ Joel bụ́ ọkpara ya na Abaịja bụ́ nwa ya nke abụọ.+ 29 Meraraị mụrụ Malaị,+ Malaị amụọ Libnaị, Libnaị amụọ Shimiaị, Shimiaị amụọ Ọza, 30 Ọza amụọ Shimia, Shimia amụọ Hagaya, Hagaya amụọ Asaya. 31 E nwere ndị Devid họpụtara ka ha na-eduzi ndị na-abụ abụ n’ụlọ Jehova mgbe a dọsachara Igbe Chineke n’ụlọ ahụ.+ 32 Tupu Solomọn arụọ ụlọ Jehova na Jeruselem,+ ọ bụ ha na-ahụ maka abụ a na-abụ n’ụlọikwuu, ya bụ, n’ụlọikwuu nzute. Ha nọkwa na-arụ ọrụ a otú a gwara ha ka ha si na-arụ ya.+ 33 Ndị a bụ ndị ha na ụmụ ha na-arụ ọrụ a: A bịa n’ụmụ Kohat, e nwere Himan+ onye ọbụ abụ, nwa Joel+ nwa Samuel 34 nwa Elkena+ nwa Jeroham nwa Iliel nwa Toa 35 nwa Zọf nwa Elkena nwa Mehat nwa Amesaị 36 nwa Elkena nwa Joel nwa Azaraya nwa Zefanaya 37 nwa Tehat nwa Asia nwa Ebayasaf nwa Kora 38 nwa Izha nwa Kohat nwa Livaị nwa Izrel. 39 Esaf+ nwanne Himan na-anọ n’aka nri ya. Esaf bụ nwa Berekaya nwa Shimia 40 nwa Maịkel nwa Baasiya nwa Malkaịja 41 nwa Etnaị nwa Zira nwa Adaya 42 nwa Itan nwa Zima nwa Shimiaị 43 nwa Jehat nwa Geshọm nwa Livaị. 44 Itan, onye so n’ụmụ ụmụ Meraraị,+ bụ́ ụmụnne Himan na Esaf, na-anọ n’aka ekpe Himan. Itan+ bụ nwa Kishaị nwa Abdaị nwa Malọk 45 nwa Hashabaya nwa Amazaya nwa Hilkaya 46 nwa Amzaị nwa Benaị nwa Shima 47 nwa Malaị nwa Mushaị nwa Meraraị nwa Livaị. 48 A họpụtara ụmụnne ha, bụ́ ndị Livaị ndị ọzọ, ka ha na-eje ozi niile a na-eje n’ụlọikwuu, ya bụ, n’ụlọ ezi Chineke.+ 49 Erọn na ụmụ ya+ na-esu àjà ọkụ n’elu ebe ịchụàjà nke àjà a na-esu ọkụ,+ na-achụkwa insens n’àjà n’elu ebe ịchụàjà insens.+ Ha na-arụkwa ọrụ niile ha kwesịrị ịrụ gbasara ihe ndị kacha nsọ. Ha na-arụ ya iji na-ekpuchiri ndị Izrel mmehie ha+ otú Mosis ohu Chineke kwuru ka a na-eme. 50 Ndị a bụ ụmụ Erọn:+ Ọ mụrụ Elieza,+ Elieza amụọ Finihas, Finihas amụọ Abishua, 51 Abishua amụọ Bọkaị, Bọkaị amụọ Ọzaị, Ọzaị amụọ Zerahaya, 52 Zerahaya amụọ Mereyọt, Mereyọt amụọ Amaraya, Amaraya amụọ Ahaịtọb,+ 53 Ahaịtọb amụọ Zedọk,+ Zedọk amụọ Ahimaz. 54 Ebe ndị a ka ha mara ụlọikwuu,* birikwa na ha: mgbe e fere nza nke mbụ, e nyere ụmụ Erọn, ndị si n’ezinụlọ Kohat, 55 Hebrọn+ nke dị na Juda, ya na ala niile gbara ya gburugburu ebe anụmanụ ha ga na-ata ahịhịa. 56 Ma, ha nyere Keleb+ nwa Jefune ala obodo ahụ na ógbè ya niile. 57 E nyekwara ụmụ Erọn obodo mgbaba dị iche iche.*+ E nyere ha Hebrọn,+ nakwa Libna+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. E nyekwara ha Jatia,+ Eshtemoa na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa.+ 58 E nyekwara ha Haịlen na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, na Diba+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, 59 na Eshan+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nakwa Bet-shimesh+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. 60 Ndị ebo Benjamin nyere ha Giba+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, na Alemet na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nakwa Anatọt+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. Obodo niile e nyere ezinụlọ ha dị iche iche dị iri na atọ.+ 61 Mgbe e fere nza, e nyere ụmụ Kohat fọrọnụ obodo iri. E si n’ezinụlọ ebo ndị ọzọ nakwa n’ọkara ebo Manase nye ha obodo ndị ahụ.+ 62 E si n’ebo Ịsaka, n’ebo Asha, n’ebo Naftalaị nakwa n’ebo Manase ndị bi na Beshan nye ụmụ Geshọm obodo iri na atọ n’ezinụlọ n’ezinụlọ.+ 63 E fere nza, si n’ebo Ruben, n’ebo Gad nakwa n’ebo Zebulọn nye ụmụ Meraraị obodo iri na abụọ n’ezinụlọ n’ezinụlọ.+ 64 Otú a ka ndị Izrel si nye ndị Livaị obodo ndị a na ala ebe anụmanụ ha ga na-ata ahịhịa.+ 65 Ha fekwara nza, si n’ebo Juda, n’ebo Simiọn nakwa n’ebo Benjamin nye ha obodo ndị a kpọrọ aha ha. 66 Ndị ebo Ifrem nyere ụfọdụ n’ime ezinụlọ ụmụ Kohat obodo ụfọdụ.+ 67 Ha nyere ha obodo mgbaba dị iche iche.* Obodo ndị ahụ bụ Shikem+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nke dị n’ala Ifrem bụ́ ugwu ugwu, Giza+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, 68 na Jọkmiam na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, na Bet-horọn+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, 69 na Aịjalọn+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nakwa Gat-rimọn+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. 70 E sikwa n’ọkara ebo Manase nye ndị ezinụlọ ụmụ Kohat fọrọnụ Ena na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa nakwa Biliem na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. 71 Ha si n’ezinụlọ ọkara ebo Manase nye ụmụ Geshọm obodo ndị a: Golan,+ nke dị na Beshan, na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa nakwa Ashtarọt na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa.+ 72 Ha sikwa n’ebo Ịsaka nye ha Kidesh na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, na Daberat+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa,+ 73 na Remọt na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nakwa Enem na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. 74 Ha sikwa n’ebo Asha nye ha Meshal na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, na Abdọn na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa,+ 75 na Hukọk na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nakwa Rihọb+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. 76 Ha sikwa n’ebo Naftalaị nye ha Kidesh+ nke dị na Galili+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, na Hamọn na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nakwa Kiriateyim na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. 77 Ha si n’ebo Zebulọn+ nye ụmụ Meraraị fọrọnụ Rimọno na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa nakwa Tebọ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. 78 Ha sikwa n’ebo Ruben, ná mpaghara Osimiri Jọdan, n’ebe dị nso na Jeriko, n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan, nye ha Biza nke dị n’ala ịkpa, ya na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, na Jehaz+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, 79 na Kedemọt+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nakwa Mefat na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. 80 Ha sikwa n’ebo Gad nye ha Remọt, nke dị na Gilied, na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, na Mahaneyim+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, 81 na Heshbọn+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa, nakwa Jeza+ na ala ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa.
^ A kpọrọ ya Geshọn n’amaokwu nke mbụ.
^ Ma ọ bụ “ụlọikwuu ndị e ji mgbidi gbaa gburugburu.”
^ O nwere ike ịbụ, “otu obodo mgbaba,” otú dabara n’ihe e kwuru na Joshụa 21:13.
^ O nwere ike ịbụ, “otu obodo mgbaba,” otú dabara n’ihe e kwuru na Joshụa 21:21.